Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Friday, March 09, 2012 Friday, March 09, 2012 Labels: သုတအဖြာဖြာ
ဒီနေ့တော့ သုတအဖြာဖြာအတွက် ရေခဲလှိုဏ်ဂူကြီး တစ်ခုအကြောင်း ပြောပြချင်ပါတယ်။ အဲဒီ လှိုဏ်ဂူကြီး ဟာ သြစတြီးယားနိုင်ငံမှာ ရှိပြီး Salzburg မြို့ကနေ ၄၀ ကီလိုမီတာလောက် ဝေးတဲ့နေရာမှာ ရှိတဲ့ Eisriesenwelt ရေခဲဂူကြီးပါ။ ထုံးကျောက်တောင်ကြီးထဲမှာ ရေခဲတွေဟာ ကျောက်ပန်းစွဲတွေ ပမာ လှပဆန်းကျယ်စွာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ သဘာဝ လှိုဏ်ဂူကြီး ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကြီးဆုံး ရေခဲဂူလည်း ဖြစ် ပါတယ်။ အဲဒီဂူကြီးထဲကို သွားကြည့်ရအောင်နော်။
လွမ်းမောဖွယ် Eisriesenwelt တောင်တန်း
တိမ်ခိုးတွေ ဝေနေတဲ့ရေခဲဂူရှိရာ ကျောက်တောင်
အတွင်းသို့ဝင်ရန် လှိုဏ်ဂူဝကို မြင်ရစဉ်
ဂူအဝက ပြန်လှည်ကြည့်ရင် မြင်ရတဲ့ မြင်ကွင်း
လှိုဏ်ဂူကိုရောက်ဖို့ ထုံးကျောက်တောင်ကြီးကို တက်ရောက်ရပြီး ဂူအဝကို ရောက်တဲ့ အခါ အေးမြတဲ့ လှိုဏ်ဂူရဲ့ အအေးဓာတ်ကြောင့် တောင်တက်လာရတဲ့ ပင်ပန်းမှုတွေကို လွှင့်ပြယ်သွားစေနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ရှည်လျားပြီး ပုံသဏ္ဍာန် အမျိုးမျိုးသော ရေခဲ ပုံဆောင်ခဲတွေနဲ့ အခန်းငယ် ကလေးတွေ ဖြစ်ပေါ်လို့နေ ပါတယ်။ အခြားသော ရေခဲဂူများလည်း ရှိပေမဲ့လို့ ဒီ Eisriesenwelt ဂူကတော့ ၄၂ ကီလိုမီတာ ( ၂၆မိုင်ခွဲခန့်) ရှိတာမို့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကြီးဆုံး ရေခဲဂူဖြစ်ပါတယ်။ ရှည်လျားလှတဲ့ ဂူ ဖြစ်ပေမဲ့လုိ့ ဂူရဲ့ အစပိုင်း ရေခဲတွေ ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ နေရာလောက်ကိုဘဲ ခရီးသွားဧည့်သည်တွေကို ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုခွင့် ပြုထားတာ ဖြစ် ပါတယ်။ ဂူရဲ့ အတွင်းဘက်မှာတော့ အင်မတန် မတ်စောက်တဲ့ လှိုဏ်ဂူအစိတ်အပိုင်းတွေ ဖြစ်တာမို့ ဝင်ခွင့်မပြုပါဘူး။
ဒီလှိုဏ်ဂူကို ၁၈၇၉ ခုနှစ်မှာ သဘာဝသိပ္ပံပညာရှင် Anton Posselt က ပထမဦးဆုံး တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး သူဟာလှိုဏ်ဂူအတွင်းကို မီတာ ၂၀၀လောက်ကိုသာ စူးစမ်းလေ့လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူ မတွေ့ရှိခင် တုန်းကတော့ ဒီရေခဲဂူကို ဒေသခံတွေလောက်သာ သိရှိခဲ့ကြပြီး သူတို့တွေဟာ ဒီလှိုဏ်ဂူပေါက်ဝဟာ ငရဲကိုသွားရောက်တဲ့ ဝင်ပေါက်ဝလို့ ယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီလှိုဏ်ကို တူးဖော်စူးစမ်းရေး လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ အခါမှာ ဒေသခံတွေဟာ စူးစမ်း လေ့လာခြင်း မပြုလုပ်ဖို့ ကန့်ကွက် ခဲ့ကြပါတယ်။ ၁၈၈ဝခုနှစ်မှာ Posselt ဟာ သူ့ရဲ့ စူးစမ်းရှာဖွေ တွေ့ရှိမှုတွေကို တောင်တက်အသင်း မဂ္ဂဇင်း တစ်ခုမှာ ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပေမဲ့ ဘယ်သူကမှ သေချာ သတိမထားမိခဲ့ကြပါဘူး။ ၁၉၁၂ခုနှစ် ရောက်တဲ့ အခါ အခြားသော ပညာရှင်များက ဆက်လက် စူးစမ်းဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပြီး ၁၉၂၀ခုနှစ်ရောက်တော့မှ အခြားသော ခရီးသွားဧည့်သည်များ ဝင်ရောက် နိုင်ခဲ့ပြီးနောက် ဒီရေခဲဂူဟာ ထင်ရှားလာခဲ့ပါတော့တယ်။
ဂူအတွင်းကို လှည့်လှည်ကြည့်ရှုချိန်ဟာ ၇၅မိနစ်ခန့် ကြာမြင့်ပြီး အမျိုးမျိုးသော လှပ ဆန်းကျယ်သော ရေခဲပုံဆောင်ခဲများ၊ ခဲနေတဲ့ ရေတံခွန်ကြီးများကို တွေ့မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Eisriesenwelt ရေခဲဂူဟာ Salzach မြစ်ကြီးစီးဆင်းရာမှ ၄င်း တောင်နံရံများကို တိုက်စားပြီး မြစ်ကြောင်း ကို ဖြတ်စီးရာမှ လှိုဏ်ဂူကြီး ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တာပါ။ ချောမွတ်တောက်ပြောင်နေတဲ့ နံရံ၊ ကျောက်စက် ပန်းဆွဲများ၊ ကျောက်သားတိုင် ကြီးများ၊ ရေခဲတုံးကြီးများရဲ့ အထူးထူးသော ပုံသဏ္ဍာန်များ တို့ဟာ ခရီးသွားဧည့်သည်များကို အထူးတလည် စိတ်ဝင်စားစေတဲ့ အချက်များဖြစ်ပါတယ်။
လှိုဏ်ဂူကြီးကို မေ၂ ၁ရက်နေ့ကနေ အောက်တိုပါ ၂၆ရက်နေ့ထိ နှစ်စဉ် ဖွင့်ထားပေးပြီး ဂူအတွင်း ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုချိန်ကတော့ မနက်ကိုးနာရီကနေ ညနေ ၃နာရီခွဲ ( ဂျူလိုင်နဲ့ သြဂတ်စ်လမှာတော့ ) ညနေ ၄နာရီခွဲထိ သတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်။ ဂူအတွင်းမှာတော့ အပူချိန်ဟာ ရေခဲမှတ်အောင် ဖြစ်တဲ့ သုညဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် အောက်ကို အမြဲတမ်း ရှိနေတတ်တာကြောင့် သာမာန် အဝတ်အစားဖြစ်တဲ့ တီရှပ်၊ ဘောင်းဘီတို စသည်တို့နဲ့ ဝင်ရောက်ခြင်း မပြုကြဘဲ နွေးထွေးထူထဲတဲ့ အဝတ်အစားများနဲ့ ဝင်ရောက်ကြဖို့ သတိပေးထားပါတယ်။ ရေခဲဂူထဲကို ဝင်ရောက်ရတာဟာ သာမာန် ကျောက်ဂူတွေထဲကို ဝင်ရောက်ရတာမျိုးနဲ့ မတူတဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ စိတ်ခံစားမှုမျိုးကို ပေးစွမ်းနိုင်တယ်လို့ သွားရောက်ကြသူ များက ပြောပါတယ်။ ကမ္ဘာမြေပေါ်က ဂူနဲ့မတူဘဲ အခြားသော ဂြိုလ်ပေါ်ကို ရောက်နေရသလို ခံစားရကြောင်း ပြောပြကြပါတယ်။ အခါအခွင့်သင့်ရင် ကျွန်မတို့လည်း ရေခဲဂူကြီးထဲကို အလည်သွားကြည့် ကြပါ စို့လားနော်။
Photos credit: http://blog.travelpod.com/
Eisriesenwelt caves from wayfaring and Flickr
နှစ်ပေါင်း နှစ်ထောင်ကျော် သက်တမ်းရှိ စင်္ကြမုနိရုပ်ပွားတော်သို့....
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Wednesday, March 07, 2012 Wednesday, March 07, 2012 Labels: ခရီးသွား မှတ်တမ်း
မင်္ဂလာပါနော်. ဒီနေ့ဟာ ကျွန်မတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာများအတွက် တပေါင်းလပြည့်နေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ အခါကြီး ရက်ကြီး ဖြစ်လေတော့ ကောင်းမှုကုသိုလ် ပြုကြတဲ့ ဓမ္မတာ ကျွန်မရဲ့ ချစ်စွာသော မိတ်ဆွေတို့ကို ဘုရားဖူး ကုသိုလ် ပေးဝေချင်ပါတယ်။ မကြာခင်ကမှ ကျွန်မဟာ ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦးမြို့ကို ရှေးဟောင်း ဘုရားများကို ဖူးမျှော်ရင်း ဓာတ်ပုံလည်းရိုက်ဖို့ သွားခဲ့ပါတယ်။ ရခိုင်ဘုရင်များ တည်ထားခဲ့တဲ့ ကြီးကျယ် ခမ်းနားလှသော ရှေးဟောင်းစေတီပုထိုးတွေနဲ့ စိတ်ဝင်စားဖို့ အလွန် ကောင်းလှတဲ့ မြောက်ဦးမြို့ကို သွားဖို့အတွက် ရန်ကုန်မှ လေယာဉ်ဖြင့် စစ်တွေမြို့သို့ အရင်သွားရပါတယ်။ ရန်ကုန်မြောက်ဦးကို ကားလမ်းကနေ သွားနိုင်ပေမဲ့လို့ အချိန်ကို ချွေတာပြီး လေယာဉ် ခရီးကို ရွေးချယ် ဖြစ် ခဲ့ပါတယ်။ စစ်တွေရောက်တဲ့အခါ အဲဒီကမှ တဆင့် မြောက်ဦးမြို့ကို ရေလမ်း၊ ကားလမ်းဖြင့် ဆက်လက်သွားရပါတယ်။ အဲဒီလို မြောက်ဦးမြို့ကို ဆက်ပြီး မသွားခင်မှာ စစ်တွေမြို့မှာ တစ်ညအိပ်ခဲ့စဉ် စစ်တွေမြို့ရဲ့ အထင်ကရ နေရာများနဲ့ ဘုရားများကို လိုက်ဖူးခဲ့ပါတယ်။ စစ်တွေမှာ ထူးထူးခြားခြား ဖူးတွေ့ခဲ့ရတဲ့ ဗုဒ္ဓ ရုပ်ပွားတော် အကြောင်းကို ဖော်ပြချင်တာကြောင့် ဒီနေ့မှာ ဒီပိုစ့်လေးကို ရေးဖြစ်တာပါ။ အားလုံးလည်း ကျွန်မနဲ့အတူ ဘုရားဖူး ကုသိုလ် ယူကြပါစို့လို့နော်။
ရန်ကုန်ကနေ စစ်တွေကို တစ်နာရီကျော်လောက် လေယာဉ်စီးပြီးနောက်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ မြို့တော် စစ်တွေလေဆ်ိပ်ကို ဆိုက်ရောက်ပါတယ်။ ကျွန်မ သွားတဲ့အချိန်ဟာ Tour season ဖြစ် တာကြောင့် လေယာဉ် တစ်စီးလုံး နီးပါး နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွားများ ဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အဓိက ခရီးဟာလည်း မြောက်ဦးမြို့ကို သွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့မှ မြောက်ဦးမြို့ ဟာ နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွားတွေ အလာများတဲ့နေရာ၊ သိပ် စိတ်ဝင်စားကြတဲ့ နေရာဆိုတာ သိရပါတော့တယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မြို့တော် စစ်တွေမြို့ရဲ့ လေဆိပ်
စစ်တွေလေဆိပ်ကို လေယာဉ်ဆိုက်တော့ ကျွန်မတို့ ကြိုတင်ပြီး Booking လုပ်ထားတဲ့ စစ်တွေ ဟိုတယ်က လေဆိပ်မှာ လာကြိုပါတယ်။ သူတို့လာကြိုတဲ့ကားနဲ့ ဟိုတယ်ကိုလိုက်ခဲ့ပြီး သိပ်မဝေးလှတဲ့ စစ်တွေဟိုတယ်ကို ရောက်တာနဲ့ မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းက လူတစ်ကိုယ်လုံးကို ရွှင်မြူး သွားစေခဲ့ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ စစ်တွေဟိုတယ်ဟာ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရဲ့ ကမ်းခြေမှာ ရှိနေတာမို့ ပင်လယ်ပြင်ကြီးကို လှမ်းမြင်နေရပြီး လှိုင်းပုတ်သံတွေကိုတောင် အတိုင်းသား ကြားရလောက်အောင် နီးကပ်စွာ ရှိနေပါတယ်။ ကမ်းခြေကတော့ ဖြူလွလွ သဲသောင်ကမ်းခြေဖြစ်ပြီး လှိုင်းဖြူဖြူတွေ ကလည်း ချက်ခြင်းဘဲ ပြေးသွားချင်လောက်အောင် လူကိုမြူဆွယ်လို့နေပါတော့တယ်။
ဟိုတယ်ထဲဝင်လိုက်တာနဲ့ ချစ်စရာ ဟိုတယ် ဝန်ထမ်းမိန်းခလေးတွေ ဆီးကြိုပြီးဧည့်ဝတ်ပြုသော အုန်းသီးဖတ်နုနုလေးတွေပါ ထည့်ထားတဲ့ အုန်းစိမ်းရည်ချိုမြမြက လေယာဉ်ပေါ်မှာ ငြီးစီစီဖြစ် ခဲ့သမျှကို ပျောက်ကင်း သွားစေနိုင်အောင် အရသာရှိလှပါတယ်။ ဒေသအစားအစာကိုသာ စားလိုတာကြောင့် ဟိုတယ်မှာ ရခိုင်လို ချက်ထားတဲ့ ထမင်းဟင်းကို မှာစားကြပြီးနောက် ခဏနားကာ ရေမိုးချိုးကာ စစ်တွေမြို့ကြီးကို လှည့်လှည် ကြည့်ရှုဖို့ ဟိုတယ်ကနေ ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ ကားသမားလေးက ရခိုင်သံဝဲဝဲနဲ့ သူတို့စစ်တွေမြို့က နာမည်ကြီး နေရာများနဲ့ တန်ခိုးကြီး ဘုရားများအကြောင်းကို ရှင်းပြတတ်ပါတယ်။ စစ်တွေမြို့မှာ ကျွန်မတို့ ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ သွားဖူးဖြစ်တဲ့ ဘုရားက အင်မတန်မှ ထူးခြားဆန်းကြယ်တဲ့ စင်္ကြမုနိ ကြေးသွန်း ရုပ်ပွားတော် ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ ရုပ်ပွားတော်ကို အင်မတန်မှ ထူးခြားတယ်လို့ ပြောရတာဟာ စင်္ကြမုနိ ရုပ်ပွားတော်ရဲ့ သွန်းလုပ်ထားတဲ့ လက္ခဏာ များကသာ ထူးခြားသည်မကဘဲ ရုပ်ပွားတော်ရောက်ရှိ ပေါ်ပေါက်လာပုံ ကလည်း အင်မတန်မှ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းလှပါတယ်။ အဲဒီအကြောင်းကို အောက်မှာ ဆက်လက်ဖော်ပြ ပါမယ်နော်။
ခုချိန်မှာတော့ ရုပ်ပွားတော်ဟာ စစ်တွေမြို့ လောကာနန္ဒာဘုရားကြီး ပရဝုဏ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ မဟာဝေယံ သာသနာ့ ဗိမ္မာန်တော်အတွင်းမှာ စံပယ်နေတာကြောင့် လောကာနန္ဒာ ဘုရားကြီးကိုလည်း ဖူးမျှော်ရင်း၊ စင်္ကြာမုနိကိုလည်း ကြည်ညိုရင်း ဆိုပြီး သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ အပေါ်က ဖူးမြင်ရတာက ဝေးဝေးကနေ ဖူးမြင်ရတဲ့ လောကနန္ဒာစေတီပါ။ ရွှေတိဂုံဘုရားနဲ့ ပုံစံတူ တည်ထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
လောကာနန္ဒာစေတီ ပုရဝုဏ်ထဲရောက်ပြီး မကြာခင်မှာ စင်္ကြမုနိရုပ်ပွားတော် စံပယ်နေတဲ့ ဗိမ္မာန်ကို လှမ်းမြင်နေရ ပါပြီ။
စင်္ကြမုနိရုပ်ပွားတော် စံမြန်းရာ ဗိမ္မာန်ကို မှန်သားများဖြင့် ကာရံထားပါတယ်။
အတွင်းထဲသို့ရောက်သွားချိန်မှာ မှန်သားနံရံ နောက်တစ်ထပ်ရဲ့ နောက်မှာ စံပယ်တော်မူနေတဲ့ စင်္ကြမုနိရုပ်ပွားတော်ကို ဖူးတွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဗိမ္မာန်ရဲ့ မျက်နှာကျက်တော်ပေါ်မှာလည်း စင်္ကြမုနိရုပ်ပွားတော်ပုံစံ ဆင်းတုတော်များကို တွေ့ရပါတယ်။
ရုပ်ပွားတော်ကို သေချာဖူးကြည့်ရင် အင်မတန်မှထူးခြားဆန်းပြားလှပြီး အခြားသော ဗုဒ္ဓဆင်းတုတော်များနဲ့ မတူ တမူထူးခြားလှတဲ့ လက်ရာများကို မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဦးခေါင်းတော်နေရာနဲ့ သင်္ကန်းတော်နေရာ တို့မှာ ဆင်းတုတော် အငယ်လေးများ အဆူပေါင်းများစွာကို ထည့်သွင်း သွန်းလုပ် ပူဇော်ထားတာ ကို မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ထိုရုပ်ပွားတော်ငယ်များမှာ အဆူပေါင်း ၁၁၆၂ဆူရှိပါတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဘယ်ဘက် လက်တော်မှာတော့ ထောင့်ရှစ်ထောင့်ပါတဲ့ ကြယ်ပုံကို ကိုင်ဆောင် ထားပြီး မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးကို ရည်ညွှန်းတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ၄င်းကြယ် အတွင်းမှာတော့ လှည်းဘီးပုံ သစ္စာလေးပါ. ဓမ္မစကြာ သင်္ကေတ စက်ဝိုင်း ပါရှိပါတယ်။ ရုပ်ပွားတော်ဟာ ကြေးသွန်း ဆင်းတုတော်ဖြစ်ပြီး အဒ္ဓပလ္လင်္ဂသေန ထိုင်တော်မူပုံ ဖြစ်ပါတယ်။ ထို အဒ္ဓပလ္လင်္ဂသေန ထိုင်တော်မူပုံမှာ အေးချမ်းတဲ့ သန္တရသ ကို ဖော်ဆောင် တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ရုပ်ပွားတော်ရဲ့ ဥာဏ်တော်အမြင့်မှာ ၁၈လက်မခန့်ရှိပြီး ထက်ဝယ် ကိုယ်တော် အကျယ်မှာ ၁၄လက်မခန့် ရှိပါတယ်။ ညာဘက်ခြေတော်ကို ဘယ်ဘက် ခြေတော်ပေါ်သို့ တင်ပြီး ထိုင်ထားဟန် ဖြစ်ပါတယ်။ လင်္ကျာဘက် လက်တော်မှာ ပဇင်္ဂမုဒြာဟန်ဖြင့် ညာလက်ဒူးတော်အောက်မှာ ချထားတဲ့ မာရ်ငါးပါးကို အောင်မြင်တော်မူဟန် ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ရုပ်ပွားတော်၏ မျက်နှာတော်အား အနီးကပ် ဖူးမြင်ရပုံ
စင်္ကြမုနိရုပ်ပွားတော်၏ နဖူးသင်းကျစ်တော်အလယ်တွင် ဥဏှလုံခေါ် မွေးရှင်တော်မြတ်ကိုလည်း ခရုပတ် သဏ္ဍန် သွန်းထုထားပါတယ်။ မျက်နှာတော်မှာ အလွန်ကြည်လင်လှတာကို ဖူးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ရုပ်ပွားတော်ရဲ့ဓမ္မခဏ်အရှေ့ပိုင်းတွင် ယေဓမ္မာဂါထာတော်ကို ဘီစီ၂-ရာစု ဓညဝတီခေတ်သုံး ဗြဟ္မီ အက္ခရာ များနှင့် ရေးထိုးထားတာကို တွေ့ရသောကြောင့် ရုပ်ပွားတော်မှာ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၂ဝဝဝ ကျော်ခန့်က သွန်းလုပ်ခဲ့တယ်လို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။
ပလ္လင်တော် ဓမ္မခဏ်အနောက်ပိုင်းမှာ ရေးထိုးထားသော စာတမ်းပါ အရေးအသားများမှာ ဗြဟ္မီ အက္ခရာမှ ဝေသာလီခေတ် ရက္ခဝဏ္ဏ အက္ခရာသို့ သိသိသာသာ ပြောင်းလဲ ရေးထိုးလာသော အက္ခရာ များ ဖြစ်ပြီး ၄င်းစာသားမှာ သက္ကရာဇ် ၅၂ဝ သူရိယကုလမင်း အလှူတော် ကောင်းမှုဟု ရေးထွင်း ထားတာကို တွေ့မြင်ရတဲ့အတွက် ဝေသာလီ ခေတ်တွင် ထပ်မံ ကိုးကွယ်သည့် သူရိယကုသလမင်းက ထိုကဗ္ဗည်းကို ရေးထိုးထားခဲ့ဟန် ရှိပါတယ်။ ထိုကြောင့်လည်း ထိုရုပ်ပွားတော်မှာ ဘီစီ ၃ ရာစု၊ သို့မဟုတ် ၂ ရာစု အတွင်း ဓညဝတီ ရခိုင်မင်းဧကရာဇ်တို့ ကိုးကွယ် သွန်းလုပ်ခဲ့တယ်လို့ ခန့်မှန်းရပြီး ရခိုင်ဘုရင် အဆက်ဆက် ကိုးကွယ်ခဲ့ကြဟန် ရှိပါတယ်။
စင်္ကြမုနိ ရုပ်ပွားတော်ဟာ အလွန် ရှားပါးပြီး ဓမ္မစက္ကပဝတ္တန မုဒြာကို စင်္ကြာသင်္ကေတနှင့် ဆန်းသစ် သွန်းလုပ်ကာ ဘုရင် ဧကရာဇ်တို့ ကိုးကွယ်အပ်သော အတိုင်းအတာ အချိုးအစားဖြင့် သွန်းလုပ်ခဲ့တဲ့ ထူးခြား ဆန်းကြယ်သော ရုပ်ပွားတော် ဖြစ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာသမိုင်းနှင့် ဗုဒ္ဓ ယဉ်ကျေးမှု အနု လက်ရာများတွင် မတွေ့ဖူးသေးသော အလွန်ရှားပါးသော ဆင်းတုတော်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂ဝဝဝကျော် ကတည်းက ကြီးကျယ်ခမ်းနားခဲ့သော ရခိုင်တို့ရဲ့ ကြေးသွန်း အတတ်ပညာနဲ့ အလွန် ရှေးကျလှသော ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်မှုကို စကြမုနိကြေးသွန်း ရုပ်ပွားတော်ကို မြင်ရုံနဲ့ ထင်ထင် ရှားရှား တွေ့မြင်နိုင် ပါတယ်။ ထိုစင်္ကြမုနိ ရုပ်ပွားတော် ပေါ်ထွက်လာပုံမှာလည်း ထူးခြား ဆန်းကြယ်လှပါတယ်။
ထိုရုပ်ပွားတော်ကို မူလတွေ့ရှိရာ နေရာမှာ ရှေးဟောင်း ရခိုင်တို့ရဲ့ မြို့တော်ဟောင်း မြောက်ဦးမြို့ မှာ ဖြစ်တယ်။ မြောက်ဦးမြို့ရှိ ဗန္ဓုလကျောင်းတိုက် ဆရာတော်မှာ ရခိုင်ရှေးဟောင်း ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများ၊ ရှေးဟောင်းဘုရား ဆင်းတုတော်များ စသည်တို့ကို စုဆောင်းထားပြီး ပြတိုက်သဖွယ် ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်လျှက် ရှိသော ဆရာတော် တစ်ပါး ဖြစ်ပါတယ်။ ၂ဝဝဝခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းမှာ ဆရာတော်ဟာ ဆွမ်းစားပင့်ထားသူ ရှိတဲ့အတွက် ဆွမ်းစားကြွရန် ကျောင်းပေါ်ကနေ ဆင်းလာချိန်မှာ အထုပ်တစ်ထုပ်ကို ပိုက်ထားတဲ့ အသက်အနည်းငယ်ကြီးတဲ့ လူတစ်ဦးကို တွေ့ရပြီး ထိုလူကြီးမှ သူပိုက်လာခဲ့သော အထုပ်ကို ဆရာတော်အား လာရောက် လှူဒါန်းကြောင်း လျှောက်ထား ပါတယ်။ အထုပ်ကို ဖြေကြည့်သော အခါမှာ ကြေးဘုရား ဆင်းတုတော် တစ်ဆူ ဖြစ်နေတာ ကို တွေ့ရတဲ့ အတွက် ထိုဆင်းတုတော်အား ဘယ်သို့ဘယ်ပုံ ရလာကြောင်း ဆရာတော်က မေးမြန်းရာတွင် ထိုသူက သူသည် “သာမရွာ” က ဖြစ်ကြောင်း၊ ချောင်းထဲတွင် ပိုက်ကွန်ပစ်ရာမှ ထိုဆင်းတုတော်ကို ရရှိ လာကြောင်း လျောက်ထားပါတယ်။ ထိုအခါ ထိုလူကြီးအား ကျောင်းပေါ်တွင် ခေတ္တ စောင့်နေရန်နှင့် ဆွမ်းစားပြီးတာနဲ့ ချက်ခြင်း ပြန်လာမှာ ဖြစ်ကြောင်း ဆရာတော်က ပြောဆိုမှာကြားကာ ဆွမ်းစားကြွ ရန် ကျောင်းကနေ ထွက်ခွာသွားခဲ့ ပါတယ်။
ဆရာတော် ဆွမ်းစားပြီးကျောင်းသို့ ပြန်ရောက်လာချိန်မှာတော့ ထိုလူမှာ ကျောင်းတွင် မရှိတော့ဘဲ ရုပ်ပွားတော်ကိုသာ ကျောင်းမှာ ချန်ထားရစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆရာတော်က တစ်ပတ်၊ နှစ်ပတ်လောက် ဆက်လက် စောင့်ကြည့်ပေမဲ့လည်း ထိုလူမှာ ပေါ်မလာတော့ပါဘူး။ ထိုသို့ ထူးဆန်းစွာ ရောက်လာသော ရုပ်ပွားတော်ကို သေချာ စစ်ဆေး ကြည့်ကြသောအခါ အလွန်ရှေးကျပြီး သက်တမ်း နှစ်ထောင်ကျော်ခန့် ရှိပြီဖြစ်သော ကြေးသွန်းရုပ်ပွားတော် ဖြစ်ကြောင်းကို လေ့လာ တွေ့ရှိကြရပါတယ်။ သမိုင်း အထောက် အထား အတွက်ရော၊ ဘာသာ၊ သာသနာအတွက်ပါ အဖိုးတန် လှတဲ့ တွေ့ရှိမှု ဖြစ်တာကြောင့် ဆရာတော်က ဆုငွေ အမြောက်အမြား ချီးမြှင့်ပါမည်ဟု မြို့ရွာ၊ နယ်တကာ ကြော်ငြာသော် လည်း ကြေးသွန်းဘုရားအား လာရောက် လှူဒါန်းသော ဒါယိကာမှာ ပေါ်မလာတော့ပါ။ ထိုလူပြောခဲ့သော “သာမ” ဆိုသည့် ရွာသို့ သွားရောက် စုံစမ်းသော အခါတွင်လည်း ထိုလူအား သိသူလည်း မရှိ၊ ဘုရားတစ်ဆူ ပိုက်ကွန်တွင် ပါလာသည်ဟုလည်း မကြားဖူးကြပါ ဆိုသော အဖြေကိုသာ ရခဲ့ပါတယ်။
အမြင့် ၁၈လက်မ အကျယ် ၁၄လက်မရှိ စင်္ကြမုနိကြေးသွန်း ရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီး
နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာပြီးကာမှ ၂၀၀ဝခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂ရက်နေ့မှာ ထူးထူးခြားခြား ပေါ်ပေါက်လာပြီး၊ သွန်းထုထားပုံ ဆန်းကြယ်လှသော စင်္ကြမုနိ ရုပ်ပွားတော်ကို ၂ဝဝဝခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၀ရက်နေ့မှာ မြောက်ဦးမြို့ ဗန္ဓုလ ကျောင်းတိုက်မှ စစ်တွေမြို့သို့ ပင့်ဆောင်လာကာ လောကာ နန္ဒာ စေတီရှိ မဟာဝေယံ သိမ်တော်တွင် အပူဇော်ခံ ထားရှိတာကြောင့် စစ်တွေမြို့ကို ရောက်သူတိုင်း၊ သို့မဟုတ် ရှေးဟောင်း လက်ရာများကို လေ့လာလိုသူတိုင်း ထူးခြားသော စင်္ကြမုနိ ရုပ်ပွားတော်ကို အလွယ်တကူ သွားရောက် ဖူးမျှော်၊ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင် မသွားရောက်နိုင်သေး သူများအတွက် ဒီနေ့ တပေါင်းလပြည့်နေ့မှာ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၂ဝဝဝကျော်က သွန်းလုပ်ခဲ့တဲ့ စင်္ကြမုနိ ရုပ်ပွားတော်ကြီးရဲ့ ကြည်ညိုဖွယ်ရာ အဆင်းပုံတော်ကို ဖူးမျှော်ရင်း ကုသိုလ်ယူကြပါစို့လို့ တိုက်တွန်း လိုက်ပါတယ်နော်။
စစ်တွေမြို့မှာရှိတဲ့ အခြားသော စေတီဘုရားများနဲ့ ထင်ရှားသော နေရာများ၊ စစ်တွေပွိုင့်ရဲ့ အလှအပ ရှုခင်းနေရာများ အကြောင်းကို မကြာခင်မှာ ဆက်လက်ရေးသား ဖော်ပြပါမယ်လို့နော်။
အားလုံးသော မိတ်ဆွေများ အေးချမ်းသာယာ ရှိကြပါစေရှင်...
ကိုးကား။ ။ စင်္ကြမုနိကြေးသွန်း ရုပ်ပွားတော်သမိုင်း၊ သမိုင်းထဲမှ မြောက်ဦးစေတီ ပုထိုးများ ( မျှားအောင်) နှင့် ဘုရား ဂေါပက လူကြီးများအား မေးမြန်းချက်များ။
ရှည်ကြ၊ ကြီးကြ ကျယ်ကြသူများ...
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Monday, March 05, 2012 Monday, March 05, 2012 Labels: သုတအဖြာဖြာ
ရှည်ကြ၊ ကြီးကြ၊ ကျယ်ကြသူများဆိုလို့ တစ်ခြား မဟုတ်ပါဘူး။ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး အရှည်ဆုံး ၊ အကျယ်ဆုံး စာရင်း ဝင်တာတွေကို ဖော်ပြချင်လို့ပါ။း)
တုရကီနိုင်ငံမှ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးနှာခေါင်းပိုင်ရှင် Mehmet Ozyurek (ကမ္ဘာစစ်ဖြစ်ရင် ပုန်းစရာနေရာ ရှာဖို့မလိုတော့ဘူး ) :)
ကမ္ဘာ့အကျယ်ဆုံးပါးစပ်ပိုင်ရှင် Francisco Domingo Joaquim (သူ့ပါးစပ်ကျယ်ကြီးထဲမှာ အနည်းဆုံး ဘီယာ သုံးဗူးတော့ ကောင်းကောင်းကြီး ဆန့်မယ်ထင်ပါရဲ့ )
ကမ္ဘာ့အပြူးဆုံးမျက်လုံးပိုင်ရှင် Kim Goodman (စိုးလွင်လွင်ရဲ့ သီချင်းထဲက ဒီလို မျက်လုံးဝိုင်း ကလေးတွေကြောင့် ဆိုတာ ဒီလိုမျက်လုံးမျိုးကို ပြောတာထင်ပါရဲ့ ) :P
ဒီပုံကတော့ ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံး နားရွက်ပိုင်ရှင်ပါတဲ့။ငယ်ကတည်းက ခုလို နားဆွဲအလေးကြီးတွေ ဆွဲသူတွေဟာ ဒီလို နားပေါက်ကြီးတွေကျယ်ပြီး နားရွက်တွေ တွဲကျနိုင်ပါတယ်။ ဒါကတော့ သူ့ဓလေ့နဲ့သူပေါ့နော်။ ဒီလိုကျယ်မှ လှတယ်လို့ တစ်ချို့သောလူမျိုးတွေကလည်း ထင်တတ်ကြသေး တယ်လေ။ မချောတစ်ယောက်လည်း သူ့ကိုအားကျပြီး နားကွင်းကြီးကြီးတွေ ဝတ်နေပြီဖြစ်ပါကြောင်း :P
သူကတော့ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံးမျက်ခုံးမွှေးပိုင်ရှင် Leonard Traenkenschuh ( မချောလည်း ရှိသမျှ မျက်ခုံးမွှေးတွေကို စုပြီး စူပါဂလူးနဲ့ ကပ်ကြည့်ဦးမှ )
ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံးမုတ်ဆိတ်မွှေးပါတဲ့ အိန္ဒိယက Badamsingh Juwansingh Gurjar ပါ။
ကြံကြံဖန်ဖန် ( ဆံပင်ရှည်တွေ ဝယ်တဲ့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံက မုတ်ဆိတ်မွှေးအရှည်ရော ဝယ်လား မသိဘူးနော်. တကယ်လို့သာ ဝယ်တယ် ဆိုရင် ယောက်ျားလေးတွေ အားလုံး မုတ်ဆိတ်အရှည်ထားပြီး ရောင်းစားရင် အတော်အလုပ်ဖြစ်မယ် ) :P
အိန္ဒိယက ကမ္ဘာ့နားရွက်မွှေးအရှည်ဆုံး Radhakant Bajpai ပါ။ (ကြည့်ရင်းနဲ့ နားယားလာသလိုဘဲ)
ကမ္ဘာ့ဆံပင်အရှည်ဆုံး အမျိုးသမီး Chenq 'Rapunzel' Shiquin ပါ။ ဆံပင်တွေဖြတ်ရောင်း ရင် ဈေးကောင်းကောင်း ရနိုင်လောက်တယ်း)
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ခေါင်းပိုင်ရှင် Andre The Giant ခေါင်းကြီးသလို ဦးနှောက်လည်း ကြီးလားမသိ။
ကမ္ဘာ့လည်ပင်းအရှည်ဆုံးကတော့ ပဒေါင် အမျိုးသမီးတွေပါတဲ့။ မြန်မာပြည်မှာလည်း ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံး စာရင်းဝင်ရှိတာ ဝမ်းသာစရာ။း)
ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံး လက်သည်းများပိုင်ရှင်Lee Redmond ဒီနေ့ကစပြီး လက်သည်းအရှည်ထားတော့မယ် ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံး စာရင်း ဝင်ချင်လို့ပါ။း)
ခုရက်ပိုင်း အတော်ရှုပ်တဲ့အလုပ်တွေနဲ့ မအားတာမို့ စာအသစ်မရေးနိုင်သေးခင် အပျင်းပြေ ကြည့်ဖို့ပါနော်။ မကြာခင် စာတွေ ပြန်ရေးပါ့မယ်လို့...
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Friday, March 02, 2012 Friday, March 02, 2012 Labels: စားသောက်ဖွယ်ရာ
တိုဖူးနွေး ပူပူလေး ဆိုလို့ မချောတစ်ယောက် တိုဖူးနွေးရောင်းနေပြီလို့ ထင်ကြမယ်ထင်ပါရဲ့နော်။း) ဒီနေ့ မတ်လ ၂ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့ တောင်သူလယ်သမားနေ့ကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် တိုဖူးနွေး လုပ်နည်းကို ဖော်ပြ ချင်ပါတယ်ရှင်။ အားလုံးလိုလိုတော့ တိုဖူးနွေးကို လုပ်တတ်ကြတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မလုပ်မဲ့ တိုဖူးနွေးက ပဲမှုန့်ကနေလုပ်တာ မဟုတ်ဘဲ Yellow Peas လို့ခေါ်တဲ့ စားတော်ပဲကနေ လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပဲမှုန့် အလွယ်တကူ ရှာမရရင် အခုလို စားတော်ပဲ ၊ ကုလားပဲတို့နဲ့ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီနည်းကတော့ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မူဆယ်မြို့က ရှမ်းဆိုင်တွေမှာ ရောင်းတဲ့ တိုဖူးနွေးလုပ်နည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်း ကို ပြောပြတဲ့ မူဆယ်မြို့က အစ်မကိုလည်း ကျေးဇူး တင်ပါတယ်။
ပထမဦးစွာ တိုဖူးနွေးပြုလုပ်ဖို့အတွက် စားတော်ပဲများကို ညကတည်းက ရေစိမ်ထားလိုက်ပါတယ်။
ရေစိမ်ပြီး ပွလာတဲ့ ပဲများကို ရေအနည်းငယ်ထည့်ပြီး ခုလို မွှေစက် ( Blender ) နဲ့ နည်းနည်းစီ ကြိတ်ခြေ လိုက်ပါတယ်။
ခုလို ညက်သွားရင် ရပါပြီ။
ပိတ်ပါးစ (သို့မဟုတ်) ရေစစ်ဖြင့် အရည်များကို စစ်ယူပါတယ်။ ထို့နောက် အဖတ်မှာ ကျန်နေတဲ့ အရည် များကိုလည်း ညှစ်ယူပါတယ်။
ခုလို အရည်တွေရပြီဆို ဆနွင်းအမှုန့်အနည်းငယ်ကို ရေနဲ့ ဖျော်ပြီးထည့်၊ ဆားသင့်တော်သလောက် ထည့်ပြီး မီးပေါ်မှာ ကျိုနိုင်ပါပြီ။
ကျိုနေစဉ်မှာ အဆက်မပြတ်မွှေပေးရန် လိုပါတယ်။ မဟုတ်ရင် ပဲအနှစ်တွေက အောက်မှာ အနည်ထိုင်ပြီး မီးတူးသွားနိုင်ပါတယ်။
တိုဖူးနွေးထဲ ထည့်စားဖို့ အဆာပလာတွေ အသင့်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ အဆာ ပလာတွေကတော့
၄.ကြာညို့ (ကြာညို့အလွယ်တကူမရနိုင်ပါက ထန်းညက်ကို အရည်ပျစ်ပျစ် ကျိုနိုင်ပါတယ်)
၉. မုန်ညင်းချဉ် တို့ဖြစ်ပါတယ်။
ကျိုထားတဲ့ တိုဖူးများ တဖြေးဖြေးနဲ့ ပျစ်လာပါပြီ။
တိုဖူးများ ရေခမ်းပြီး ပျစ်လာပြီဆိုရင် ရှမ်းခေါက်ဆွဲ ၊ ဆန်ခေါက်ဆွဲတို့ဖြင့် ထည့်စားလို့ ရပါပြီ။ ခေါက်ဆွဲများ မထည့်လိုပါကလည်း တိုဖူးနွေးချည်း စားနိုင်ပါတယ်နော်။
ခေါက်ဆွဲကို သီးသန့်မပြုတ်ဘဲ တိုဖူးနွေးပူပူထဲကို ထည့်ပြီး ခဏ ထားလိုက်ပါတယ်။ ရွှေပဲရွက်ကိုလည်း တိုဖူးထဲ ထည့်ပါတယ်
ရွှေပဲရွက်နဲ့ တိုဖူးနွေးအဆင်သင့်ဖြစ်ရင် အဆာပလာများ ထည့်လို့ရပါပြီ။
အပေါ်က အဆာပလာများနဲ့ ဆား၊အရသာမှုန့်တို့ကို သင့်တင့်အောင် ထည့်လိုက်ရင် စားဖို့ အဆင်သင့် ဖြစ်ပါပြီ။
တိုဖူးနွေးဆိုတာကတော့ ပူပူနွေးနွေးအချိန်မှသာ စားလို့ကောင်းတာပါ။ အေးသွားရင် ခဲသွားတာမို့ စားရတာ အဆင်မပြေပါဘူး။ ရှမ်းရိုးရာအစားအစာဖြစ်တဲ့ တိုဖူးနွေးနဲ့ ဒီတစ်ပတ်တော့ ကျေနပ်ကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါ တယ်ရှင်။